Lozan'ny fahazoan-dàlana cannabis - Nahoana ny firenena no voan'ny fahazoan-dàlana cannabis -
Ahoana ny fomba hitadiavana fahazoan-dàlana Cananbis
Te hanana antso haingana momba ny fampiharana anao
Avereno jerena ny fampiharana anao miaraka amin'ny mpisolovava amin'ny ozinina
Handinika sy manakiana momba ny fahazoan-dàlana cannabis ianao miaraka amin'ny maso mijery ny sivana sy ny mety ho loza mety hitranga.
* Safidio ny vola
Ampio ny karatra vaovao
Manaiky ny Fepetra
Aloavy $ $5500
Ny fandoavam-bola mahomby
Misaotra anao nividy.
Haverina ao anaty pejy ny pejy 5 segondra.
Nahoana ny ekipa no mikatsaka fahazoan-dàlana cannabis
Lozan'ny fahazoan-dàlana cannabis mitranga aorian'ny fihodinana fampiharana fifaninanana. Ny fanjakana na ny tanàna dia iharan'ny risika amin'ny raharaham-pitsarana fahazoan-dàlana hitrandraka rongony raha toa ka mihoatra ny isan'ny fahazoan-dàlana misy ny rongony. Ankoatr'izay, ny fangatahana fahazoan-dàlana hitrandraka rongony matetika dia voasokajy amin'ny antoko fahatelo, toy ny orinasan-kaonty efatra lehibe, izay mety hanao fahadisoana amin'ny famitana ny hevi-dehibe. Azonao atao ny manantena ekipa maro hitaky fahazoan-dàlana rongony raha mino izy ireo fa tokony nandresy. Ity misy lahatsoratra fohy momba ny fizotrany.
Hevi-dehibe ho an'ny Lawsuits momba ny fahazoan-dàlana cannabis
Araho ny lalànao na eo an-toerana
fantaro izay tsy nety tamin'ny fampiharana
mifanaraka amin'ny fomba fiasa mahaliana ny fanapahan-kevitra
Fantaro fa tsy azo antoka ny fanandramana ary mety ho very ianao
Manaova fitarainana sy fomba am-pandresena an-tsoratra
Ianaro ny zava-drehetra momba ny fahazoana lisansa amin'ny ho avy
FIVAVAHANA MISY: Trano fivarotana cannabis any Illinois
FIVAVAHANA MISY: Illinois fampiharana lisansa Illinois
FIVAVAHANA MISY: Cannabis sy fikarohana momba ny fikarohana
FIVAVAHANA MISY: Fampisehoana manokana
Te-hanao mpisolovava otrikaretina ny famerenanao ny fampiharana?
Makà famerenana famerenana
MANDEHANA NY FAHAGAGANA ANAO AN'ANDRIAMANITRA CANNABIS
Mihevitra isika rehetra fa, rehefa niasa mafy dia mafy isika, dia mendrika ny hahazo fahazoan-dàlana rongony - fa any amin'ny fanjakana mifaninana - ny ankamaroan'ny olona dia tsy mandresy. Ary tamin'izay vao nanomboka nirongatra ny fitoriana… hiresaka momba izany isika amin'ny fizarana anio.
Fisoratana an-tsoratra - TENY LEGALISATION CANNABIS
Misaotra anao nanatevin-daharana anay, Tom aho - ary afaka mahita ahy ianao amin'ny alàlan'ny tranokalako - cannabis industry lawyer.com - toerana nametrahako atiny toy izao mba hahitanao izay rehetra tianao ho fantatra momba ny indostrian'ny rongony ara-dalàna.
NY LICENSES CANNABIS MAMPISOLOKA MOMBA NY FAMPITANANA VOATSIKA ARY MAMPIKOMITIANA
Ity misy zavatra mety efa fantatrao - tsy ny fanjakana rehetra no mamela an'izay maniry fahazoan-dàlana rongony hahazo iray - Fanjakana toa an'i Illinois, na Missouri, Maryland - izy ireo dia nandray rafi-dalàna momba ny fahazoan-dàlana ka ny fampiharana dia nomen'ny manam-pahaizana antsoina hoe «tsara indrindra». " Miambena mandra-pahatongan'ny farany dia holazaiko aminao ny fomba iray izay mety hamaranana ny fitoriana rehetra, izay tsy misy itiavako azy ho mpitsara ny rongony. Saingy tsy maninona any Illinois izany, na angamba ny fanjakanao.
FAMPISORANA IZANY DIA TOKONY HAKAKATESANA NY FIKAMBANANA CANNABIS MAMPISONDRANA FIVORIANA VOLA
Na dia matanjaka aza ny ekipanao ary nahazo fahazoan-dàlana. Ilokana ihany no nizara an'i Illinois efa-polo mpanamory asa tanana sy fahazoan-dàlana 40 infuser. Ary, i Illinois dia tsy hanome afa-tsy fahazoan-dàlana famerenam-pahefana 75 amin'ny fampiasana olon-dehibe, fa efa nahazo fangatahana avy lavitra 700 ekipa nandefa fampiharana maherin'ny 4,000. Ka lava ny fifanolanana - ary ny Fanjakana tato ho ato nahazo KPMG, iray amin'ireo firafitry ny kaonty efatra lehibe, ny fifanarahana hahavitanao ny fizarana fangatahana tato ho ato. Ny fifanarahana dia manome tetikasa consulting grading mistery ho an'ny roa tapitrisa dolara (2,000,000 XNUMX XNUMX dolara).
TONTOLO FIANGONANA FAMPISORANA FAMPIANARANA CANNABIS CANNABIS
Fanamarihana mahaliana iray hafa ao amin'ny fifaneken'ny Fanjakana miaraka amin'ny KPMG dia ny fanombanany $ 500,000 amin'ny “consultation legal”, amin'ny taha 200 $ / ora marobe. Raha ny hevitry ny laika dia toa vonona hanolotra ora an-jatony amin'ny asa fanaovan-tsonia ireo mpisolovava “fifanarahana” na “tetikasa” ny Fanjakana. Raha mbola tsy fantatrao - dia torotoroy ny tiany sy hisoratra anarana hianatra bebe kokoa momba ny lalàna rongony - fa ny asan'ny mpisolovava amin'ny fifanarahana dia mampiditra am-bava ireo mpisolovava tsy za-draharaha ao anaty efitrano iray, izay omena vola kely izy ireo hitrandrahana asa monotonous. , ka miteraka vokatra izay ankafizin'ny olona vitsivitsy - na dia ny olona manao azy aza. Izay no toa mifidy izay ekipa mahazo fahazoan-dàlana. Izay mandany fotoana lehibe rehefa mandinika ny matematika momba ilay raharaha ianao.
Ny matematika tsotra dia mibaiko fa ho resy ny ankamaroan'ny mpangataka. Fampiharana 4,000 amin'ny fahazoan-dàlana dispensary 75 fotsiny dia mitovy amin'ny 98.125% tsy fahombiazana - hoy ny fitenenana, ny fanantenana dia mipoitra mandrakizay ao amin'ny hazakazaka maitso an'ny indostrian'ny rongony. Raha tsy ampy ny elanelana, ny fizotry ny isa napetraky ny fanjakana dia mahatonga ny mpangataka sasany ho resy fotsiny noho ny hadisoan'ny olombelona. Noho ny antony tsara, ny ekipanao dia mety maniry ny hitory ny Fanjakana na ny tanàna hahazoana ny fahazoan-dàlana rongony izay inoany fa azony.
Te hanao apetraka amin'ny fanapahan-kevitrao ianao
Zahao ny lalànan'ny fanjakanao momba ny fomba hampiakarana ny fanapahan-kevitry ny mari-pana
Ho an'i Illinois, ny Ny fitsipiky ny otrikaina sy ny lalàna momba ny hetra mamela ny mpangataka hitory eo ambanin'ny lalàna momba ny famerenana fitantanan-draharaham-panjakana milaza fa "[a] ny fanapahan-kevitry ny Sampan-draharaha eto ambany dia iharan'ny fitsapam-pitsarana araka ny voalazan'ny lalàna momba ny famerenana fitantanan-draharaha [.]" miseho ao amin'ny distrika izay ipetrahan'ny antoko mangataka famerenana (ny mpangataka), na ny County Sangamon ho an'ny antoko ivelan'ny fanjakana. Raha miresaka momba ny mpijery fanjakana dia zahao ny fahefan'ny fanjakana ao amin'ny ekipanao momba ny zony manokana. Mila manaraka ireo fepetra takiana ireo ianao hanenjehana ny zonao.
Ireo fomba fiasa momba ny famerenam-pahefana dia tokony harahina
Ny Lalàm-panadihadiana Momba ny Fitsarana any Illinois dia manana fepetra vitsivitsy mahaliana hanaovana izany. Izany dia mitaky ny fahazoan-dàlana ho an'ny antoko mitady fitadiavana hametraka fitarainana ary hamoaka fivoahana ao anatiny dimy amby telo-polo (35) andro tamin'ilay fanapahan-kevitra momba ny fitantanana. Ny Plaintiff dia afaka mitaky amin'ny departemantan'ny fambolena sy ny IDFPR hanome ny rakitsoratra feno ny fizahana fizahana eo ambanin'ny fizarana 3-108 (a). Na izany aza, "[n] o porofo vaovao na fanampiny hanohanana na amin'ny fanoherana ny fitadiavana, filaminana, fanapaha-kevitra na fanapahan-kevitry ny masoivoho mpitantana dia tokony henoin'ny fitsarana." Io fizarana io ihany dia manome fa "[t] izy nahita sy fanatsoahan-kevitry ny masoivoho mpitantana amin'ny fanontaniana misy dia tokony hitranga prima facie marina sy marina. ”
Tsarovy ireo fotoana rehetra nilazako ireo fa mila ny fampiharana feno sy feno indrindra azo atao ianao - mety izany satria ny fizotran'ny fampiakarana ny fanjakana dia maka izany fangatahana izany satria ny rakitsoratry ny antso dia tsy azonao ampidirina zava-baovao aminy hanodinkodinana ny hevitr'izy ireo.
Ankoatr'izay dia mety ho sarotra eto - izay mifanentana amin'ny làlan'ny raharaham-pitsarana sarotra resahina - ny fampiharana rongony matetika dia misy fepetra mivaingana, miaraka amin'ny rafitra teboka toa feno. Na izany aza, ny mpangataka dia isaina amin'ny alàlan'ny fanarahan'izy ireo ny lalàna ihany, fa koa ny mety sy ny fahaizany amin'ny maha orinasa. Ohatra, raha tapa-kevitra ny Fanjakana fa tsara ny proformas sy ny sandam-bolan'ny mpangataka, nefa tsia lehibe, famaritana lalàna na zava-misy ve izany? Ireo fampiharana ireo dia toa ny fanontaniana mifangaro mahazatra momba ny lalàna sy ny zava-misy - zavatra iray izay hampifangaro ny tsy litigatera, izay tsy ananan'ny ankamaroan'ny mpangataka.
Ankoatr'izay, ny isa namboarina ho tanjona dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny olombelona. Manampy trotraka kokoa ny raharaha ny fe-potoana hamoahana ny isa napetraka ao amin'ny lalàna, izay azo ovaina tamin'ny alàlan'ny baiko mpanatanteraka ihany. Izany dia efa nitranga tany Illinois, raha ny 12 martsa 2020, ny governora JB Pritzker dia namoaka didy mpanatanteraka mifandraika amin'ny coronavirus izay nanitatra ny fe-potoana fandefasana fangatahana tao anatin'ny roa herinandro. Ny fahatarana fanampiny dia mety ho avy any Illinois. Tany amin'ny fanjakana hafa no nitrangan'izany - tsy nisy areti-mandringana eran-tany.
Famerenana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana cannabis any amin'ny firenena samihafa
Rehefa avy nandinika ireo firenena hafa ho mpitari-dalana anay izahay dia manana hevitra tsara momba ny ho avy manaraka rehefa misy ny fanalefahan-doza. Ny fanjakàn'i Florida dia nanatanteraka ny fomba fipetrahana tsotra amin'ny litigants ho takalon'ny fanomezana a Mombamomba ny mpanoratra. Mandalo ady ara-dalàna ihany koa i Florida satria mitaky orinasa miorim-paka ny orinasa cannabis Integrated, izay misy fiantraikany amin'ny famoronana sakana lehibe amin'ny fidirana. Missouri koa dia miatrika valin-kafatra mafy taorian'ny fampiharana farany. Betsaka ny fitoriana - an-jatony - miandry aorian'ny mpangataka an-jatony sy an-jatony maro no tsy nahomby tamin'ny fanjakana. Lisansa fambolena 60. Ny tena mahasosotra kokoa any Missouri dia toa ireo mpanao fandresena dia toa matetika amin'ny politika mifandray olona. Amin'ny fanomanana ireo ekipa mpangataka anay, dia hitanay maso tsara ny haben'ny fiovana ataon'ny governemanta eo an-toerana amin'ny fanohanana na fanoherana ny mpangataka. Mety efa naheno ahy nilaza ahy taloha ianao, ary raha misoratra anarana ianao dia hohenoinao miteny indray aho - ny rongony dia eo an-toerana avokoa.
Famandrihana fahazoan-dàlana cannabis sy Rafitra Lottery
Tsy afaka milaza mazava tsara izahay hoe hanao ahoana ny raharaha fitsarana rongony any Illinois. Fa raha i Florida sy i Missouri dia misy famantarana, dia ho orinasa lehibe hijanonana eto izany. Misaotra anao nijery hatramin'ny farany - Andao izao alao sary an-tsaina ny fomba iray izay mety ahafahan'ny fanjakana sasany manalavitra ny andraikitra amin'ny mpangataka isa tsy mendrika amin'ny isa ambony indrindra. Ny fisorohana an'ity raharaham-pitsarana ity dia mety ho zavatra tian'ny fanjakana hotanterahan'ny lalàny.
Ny fanjakana toa an'i Arizona, ohatra, dia nanolotra lalàna rongony izay mitaky fepetra takiana amin'ny mpangataka iray izay miasa ho tokonam-baravarana hahafahany milalao loteria hahazoana fahazoan-dàlana. Miantso loteria i Illinois 'raha misy fifamatorana eo amin'ireo mpangataka isa be indrindra. Ny loteria tena izy dia sarotra kokoa ny miady hevitra fa nisy nampijaliana anao, raha tsy hoe voafitaka. Saingy azo antoka fa tsy misy azo hosokaina amin'ny indostrian'ny rongony, na indostria hafa - sa tsy izany?